I-Aloe Vera Deliplús ifezekisa ubisi lomzimba | Amadoda aQinisekileyo
Kwihlabathi lezithambiso, yonke into ayizukubakho iklasi ephezulu NjengeBiotherm Homme okanye ii "brand" ezinjengeL'Oreal. Kubo bonke abo bafuna ukuqala kukhathalelo lwamadoda (okanye ukhathalelo ngokubanzi) ngexabiso elincinci, nantsi inketho: I-Deliplús Aloe Vera ethambisa ubisi lomzimba, okanye yintoni efanayo, ileyibheli emhlophe yeMercadona.
Umzimba uhlala yindawo yethu ebuthathaka, Asinakunikezela ngexesha kwinkathalelo yakho. Siyahlamba kunye nenye into encinci. Singachitha eminye imizuzu emihlanu ebusweni, kodwa umzimba uhlala kwisitulo esingasemva. Ngesi sizathu, akukho nto ilunge ngakumbi kunekrimu ebiza kakhulu ukuqala ngayo.
Ayisiyo ikrimu ekhethekileyo yamadoda, kodwa ingeyiyo eyabafazi, ngenxa yoko sinokuyisebenzisa ngaphandle kweengxaki. Kamva equlathe iAloe Vera ihlala isiqinisekiso se-hydration. Masingalindeli ukuba itshintshe ulusu lwethu lube lolomntwana, kodwa iqinisekisa ngaphezulu kwe-hydration eyamkelekileyo. Icala elisezantsi lelokuba kunokuba ngamafutha amancinci, kodwa akukho nto igqithisileyo. Nangona kunjalo, ngaphandle kwamathandabuzo lukhetho olunconyelwe kakhulu.
Kodwa kusekho eyona intle, ixabiso. Ukuba siyithelekisa nemveliso ephezulu enje nge-Biotherm moisturizer yomzimba, ayishiyi ndawo yokuthandabuza. Iindleko zesithambisi esiphezulu ngama-30,50 eeuros (250 milliliters), ngeyure enye amashumi amathathu (400 milliliters) Kunye nomlondolozi weMercadona. Umahluko wamaxabiso awugwetyelwa kude, ke ngoku kukuwe ukuba uthathe isigqibo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukuthambisa ubisi lomzimba Aloe Vera Deliplús
Isiphakamiso esihle kakhulu, Hector. Izinto zokuthambisa ezisemgangathweni azithethi kuthi izinto zokuthambisa ezibiza kakhulu.
Okwangoku, into yokuthambisa umzimba ngeoyile ye-olive ilungile kakhulu (ubuncinci kulusu lwam isebenze kakuhle!)
Poncho yeenkomo, nguZara
Zara Ekhaya ekwindla-kobusika 2010-2011